‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकिनुस्, आराम गर्नुस् भन्नुपर्छ’ :: सन्जिब बगाले :: Setopati
‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकिनुस्, आराम गर्नुस् भन्नुपर्छ’ बाबुले पढाएका प्रधानमन्त्रीको छोराले गरे सर्जरी
सन्जिब बगाले काठमाडौ,फागुन २५
डा. उत्तमकुमार शर्मा।
उनी ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउँछन्। त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा मुख्य भूमिकामा रहेर पनि चर्चामा आएनन्।
गत फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय सार्वजनिक भयो। त्यसपछि मात्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्राध्यापक डा. उत्तमकुमार शर्माले आधिकारिक जानकारी पाए।
प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार साँझ ६ बजे अस्पताल भर्ना भए। आठ बजे मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग डा. शर्माको कुराकानी भयो। त्रिभुवन विश्विद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र अन्य चिकित्सक भएका बेलामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले डा. शर्मा आफ्ना शिक्षकको छोरा भएको बताए।
डा. शर्माका बाबु दाताराम शर्माले ओलीलाई कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म झापाको घैलाडुब्बा माध्यमिक विद्यालयमा पढाएका थिए। डा. शर्मालाई आफ्ना बाबुले बेलाबखतमा मैले पढाएको विद्यार्थी शीर्ष नेता हो भनेर भन्ने गरेका रहेछन्। उनका बाबुको २०६९ सालमा मृत्यु भयो। तर ओली पहिलोपटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बने।
राजनीतिबाट टाढा रहेका उत्तमले ओलीलाई भेट्न गएनन्। त्यसैले अस्पतालमै उनको पहिलो पटक भेट भयो। तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई पनि मेरो शिक्षकको छोरा भन्ने थाहा थियो, अनि डा. उत्तमलाई पनि प्रधानमन्त्री मेरा बाबुका विद्यार्थी हुन् भन्ने थाहा थियो।
‘त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले मुस्कान दिएर मप्रति लक्षित गर्दै उहाँ त मेरो गुरुको छोरा हो भनेर अरुलाई भन्नुभएको थियो। अर्को डाक्टरसापलाई सुनाउनु भएको, त्यतिखेर मलाई झन् गर्व लाग्यो’ प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो भेटबारे शर्माले भने। प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो कुरा अर्थपूर्ण लागेको उनले बताए।
शर्माले भने ‘यस्तो पोजिसनमा पुगेपछि धेरैले आफूले टेकेको धरातल बिर्सिन्छन्। तर उहाँले स्पष्टसँग आफ्नो कुरा राख्नुभयो। चिकित्साको सिलसिलामा देश हाक्ने मानिससँग कुराकानी गर्न पाउँदा झनै खुशी लाग्यो।’
यही भएर होला प्रधानमन्त्री र शर्माको भावनात्मक कुराकानी पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विगतका कुरा पनि डा शर्मालाई सुनाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नी हजुरआमा, बुवा र शिक्षक दाताराम शर्मा (डा उत्तमका बुवा)लाई आफ्नो आदर्श ठान्दा रहेछन्।
विगतको घैला डुब्बा मावि अहिले आदर्श विद्या मन्दिर बनेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा। त्यो कुरा पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै थाहा पाएका रहेछन्।
डा. उत्तमले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा पहिला उनको स्वास्थ्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा रहेछन्। हामीले पनि उनीसँग प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्य अवस्था सोध्यौँ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको र दिनानुदिन सुधार भइरहेको डा. शर्माले बताए।
सहकर्मीहरूसँग डा. उत्तमकुमार शर्मा।
‘ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सघन कक्षमा आइसोलेट गरेर राख्ने ठाउँमा राखेका छौँ। क्रमिक रुपमा उहाँको दिननुदिन सुधार हुँदै गएको छ। आजको दिनसम्म स्वास्थ्य धेरै नै राम्रो भएको छ। अपेक्षाकृत रुपमा स्वास्थ्य अगाडि बढेको छ’ उनले भने, ‘बेडमा आफै यताउता गर्नुहुन्छ्, त्यसपछि हामीसँग बोलचाल गर्ने, खाना आफैले खाने, ट्वाइलेटसम्म आफैं जाने गर्नुभएको छ। हामी पनि होसियार त हुन्छौँ। तर उहाँले आफैले धेरै गर्न थाल्नुभएको छ।’
अपरशेनपछि डा. उत्तमले नै प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो छ भनेर सोधेका थिए। ‘उहाँले बोल्ने भनेको राजनीतिक सन्देश दिएजस्तो हुँदैन। जिब्रो देखाउनुस् हात तान्नोस् भन्ने हो’ शर्माले भने ‘उहाँको मस्तिष्क र हामीले बोलेको संयोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। हामीले सञ्चै छ? भन्दा उहाँले ठिकै छ भन्नुभएको थियो।’
अपरेशन गरेको बिरामीले दोहोरो कुराकानी गर्नु, भोक लाग्यो भन्नु, पुराना कुराहरु गर्नु ‘मेडीकल्ली’ असाध्यै राम्रो हुने उनले बताए। यसले बिरामी सामान्य अवस्थामा गइरहेको संकेत दिने उनको भनाई छ।
‘बिरामी भएको मान्छेलाई १० वटा कुरा सोध्नु राम्रो होइन, तर उहाँले नै पहिला कुराकानीको सुरुआत गर्नुहुन्छ। कहिलेकाही पल्स रेट बढ्न थाल्यो भने पनि म छोडेर जान्छु।’
प्रधानमन्त्री ओली उखान टुक्का भन्न र ठट्टा गरेर कुराकानी गर्न रुचाउँछन्। यो उनको विशेषता हो। यस पटक अस्पताल बसाइमा उनले आफ्नो शैली देखाएका छन् कि छैनन् भनेर सोध्दा अहिले नै त्यो वातावरण नबनिसकेको तर अझै पनि प्रधानमन्त्री रमाइलो पाराले बोल्न भने खोजिरहेको डा. शर्माले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दा बोल्दै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताए। ‘अहिले आराम गर्नुस् भन्न पर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘एकदमै रमाइलो गफ गर्न मन पराउने उहाँको बानी होला, आत्मीयता बढेर पनि होला मलाई पनि उहाँसँग बारम्बार कुरा गरिरहुँ जस्तो हुन्छ।’
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका सूचकहरु राम्रो रहेको उनले बताए। उपचारका क्रममा पिसाबको नलीमा पाइप राखिएको छ। सामान्यत, बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीलाई सोमबार, मंगलबार डिस्चार्ज गरिन्छ।
तर प्रधानमन्त्री भएकाले केही दिन बढी अस्पताल राख्ने चिकित्सकको योजना छ। अस्पतालबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले धेरै भेटघाट गर्ने र त्यसले संक्रमणको जोखिम बढाउने भएकाले चिकित्सकहरुले केही दिन बढी अस्पतालमा राख्न खोजेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको आत्मबल देखेर भने चिकित्सकहरु नै चकित भएका छन्।
‘दुई, तीन महिना अगाडि त्यत्रो अपरेशन भयो। डायलासिसमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले दोश्रो प्रत्यारोपण भएको छ। तर सुधारको गति चाँडो छ। उहाँको मनोबलबाट हामी त आश्चर्यमा छौँ’ शर्माले भने, ‘ हौसला आफूसँग मात्रै होइन, अरुलाई पनि दिनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीको अवस्था सामान्य बनाउनका लागि समेत मनोबलको भुमिका उच्च रहेको उनले बताए। ‘मैले त अरु बिरामीलाई पनि भन्छु तपाईले म गर्छु, राम्रो हुन्छु भन्नुभयो भने पचास प्रतिशत ठीक हुन्छ। हाम्रो काम भनेको मेडिकल्ली ठीक गर्दै जाने हो। यो दुवैको संयोजन भयो भने सतप्रतिशत नतिजा आउँछ’ उनले भने।
चिकित्सकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि अबको चुनौति भनेकै संक्रमणबाट जोगाउनु हो। यसका लागि उनले व्यक्तिगत सरसफाइ र वरपरको वातावरणको सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै आरामको पनि जरुरी छ। ओलीले तत्कालै भेटवार्ता गर्ने वा भीडभाडमा जानु हुँदैन।
‘भेटवार्ता र भीडमा नजान सुझाव दिन्छु। यो गर्न हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यु भनेको छु, उहाँले मुन्टो मात्रै हल्लाउनुभयो’ डा. उत्तम शर्माले भने ‘तीन महिना संक्रमणको डर छ। सघन कक्षको आइसियुमा राखेका कारण संक्रमण नहोस् भन्ने हो।’
मिर्गौला दान गर्ने समिक्षा संग्रौला स्वास्थ्यमा पनि एकदमै ख्याल गरिएको उनले बताए। समिक्षाले आफन्तलाई भेट्ने र हिँडडुल गर्न थालिसकेकी छिन्।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १२ वर्ष अगाडि ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्राध्यापक डाक्टर अनन्तकुमार भारतबाट आएका थिए। अरु दुई जना फिजिसियन पनि उनीसँगै आएका थिए। उनीहरुको पनि प्रधानमन्त्रीको उपचारका क्रममा महत्वपुर्ण भूमिका रहेको शर्माले बताए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन २५, २०७६, ०७:३२:००
आइतबार थपिए २१३ जना कोरोना संक्रमित
भीम रावलको प्रश्न - चकलेटको कर किन घट्यो, मलको कर किन बढ्यो?
विरोध खतिवडाको टिप्पणी - गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल हाँसे पानी पर्छ
'तँ... तँ, बाहुन हुँदैमा गोरी छस्' रेशा भट्टराई